Miaraka Aminay Eny Foana Ny Aterineto N’aiza N’aiza Alehanay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2013 18:27 GMT
Somary lehibe kokoa noho ireny boky mafy fono ireny monja, ny fitaovana fisintonana ny onjan'ny zanabolana dia ahafahana mahazo aterineto eny an-dàlana. Ka izany indrindra izao no azon'ny Rising Voices atao ! Ny vokatra vaovao Thuraya IP+ Terminal no manome anay fahafahana mahazo ny aterineto n'aiza n'aiza hanaovanay ny asanay, tsy misy hifandraisany amin'ny fahazoana ny aterineto eto an-toerana – amin'ny alalan'ny zanabolana Thuraya.
Manohana ny Global Voices ny Thuraya amin'ny alalan'ity fiaovana ity ary manome herintaona maimaim-poana hahafahana mahazo aterineto, ampiasain'ireo mpikambana ao amin'ny Rising Voices manokana. Nampahafantarina anay ny IP+ Terminal tamin'ny fivorian'ny Eurovision isan-taona, News Xchange tao Marrakech, Maroc ny 15 Novambra 2013 ho fideràna ny fihavaozan'ny asanay miaraka amin'ireo mediam-bahoaka.